Root Tool တွေထဲမှာ အောင်မြင်နေဆဲ SuperOneClick v2.3.3 Root Tool - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Root Tools ဆော့ဖ်ဝဲများ Root Tool တွေထဲမှာ အောင်မြင်နေဆဲ SuperOneClick v2.3.3 Root Tool
Root Tool တွေထဲမှာ အောင်မြင်နေဆဲ SuperOneClick v2.3.3 Root Tool
Maung Pauk at 6:12:00 PM Root Tools, ဆော့ဖ်ဝဲများ,
ဒီ SuperOneClick Root Tool ကိုတော့ ပို့စ်အနေနဲ့ သီးခြားမတင်ဖြစ်ပါဘူး. လူတော်တော်များများ လက်ထဲမှာ ရောက်နှင့်နေပြီးသားထင်လို့ပါ.. Google မှာလည်း အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလာတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ SuperOneClick v2.3.3 ကိုပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
1.မိမိဖုန်းနဲ့ကိုက်ညီပြီးမှန်ကန်တဲ့ Driver တင်ထားရပါမယ်.. မရှိရင် အောက်ကလင့်မှာ Driver တွေ တင်ထားပါတယ်..
2. ပြီးရင် ဖုန်းမှာ USB Debugging နဲ့ Unknown Source ကို On ပေးပြီး Phone ကို Computer နဲ့ချိတ်ပါ..
3. SuperOneClick.exe ကို Run လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် Donate လုပ်ဖို့အတွက် ဘောက်ကျလာပါမယ်.. လှူချင်ရင်လှူ၊ မလှူချင်ရင်တော့ Donate Later ကိုနှိပ်ပါ.. ဒါဆိုရင် SuperOneClick Root Box ကျလာပါမယ်..
4. ညာဘက်ဆုံးက Exploit မှာ ရွေးစရာ နှစ်ခုရှိပါတယ်.. HTC ဆိုရင်တော့ psneuter ကိုရွေးထားပြီး Root လုပ်ကြည့်ပါ. မရရင် zergRush ကိုရွေးပါ.. အခြားဖုန်းဆိုရင်တော့ zergRush ကိုရွေးထားပြီး Root Button ကိုနှိပ်ပါ..
5. တကယ်လို့များ " Autometic version check failed. Is your OS version 2.0 or higher? " လို့ Warning တက်လာရင် Yes ကိုရွေးလိုက်ပါ.. နောက်ထပ် "Device properties could not be read! (You should try rebooting your device)" လို့ Warning တက်လာရင် Ignore ကိုနှိပ်ပါ..
7. ဒါဆိုရင်တော့ Root လုပ်နေတာကို မြင်ရပါမယ်.. Root လုပ်ငန်းပြီးတာနဲ့ " Root install has completed! Would you like runatest? " ဆိုပြီး Root ပြီး မပြီး စစ်ချင်တာလား မေးပါတယ်.. စစ်မယ်ဆိုရင် တော့ Yes ပေါ့. ဒါဆိုရင်တော့ သေသေချာချာ ပြန်စစ်နေပါတယ်.. တကယ်ပြီးသွားရင်တော့ " Your device has been rooted! Would you like to donate now ?" ဆိုပြီး Root လုပ်တာတော့ပြီးသွားပြီ အလှူလေး မစ ချင်သလား. မေးပါတယ်.. လှူချင်ရင်တော့ yes ကိုနှိပ်ပြီး လှူနိုင်ပါတယ်.. လှူမယ်လည်း မထင်ပါဘူး.. ( Online Bank Account ) မှ မရှိတာနှော..
SuperOneClick v2.3.3 Root Tool က 2012 မှာ နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တာပါ.. အဲဒီတုန်းက Android 4.0 လောက်ပဲ ထွက်အုံးမယ်ထင်ပါတယ်.. SuperOneClick v2.3.3 Root Tool နဲ့ Root လုပ်နိုင်တာတွေကတော့-
Samsung Glaxy S 4G
Samsung Glaxy S SCH-I500
Samsung Glaxy 551 (GT-I5510)
Samsung Glaxy Portal/Spica I5700
HTC Magic (Sapphire) 32 B
Download : 10.14 MB
Root Tools, ဆော့ဖ်ဝဲများ
Root Tools ဆော့ဖ်ဝဲများ
လွမ်းဦးမောင်(မြောင်းမြ) June 6, 2013 at 10:47 AM